Devozione del giorno: la contrizione, il passo verso il perdono | PREGHIERA&NEWS
Oge nke ụbọchị: nchegharị, nzọụkwụ maka mgbaghara
Olee otú o kwesịrị ịdị. Na mmehie gị ị na-akpasu Chineke iwe nke bụ ezigbo Nna na-enweghị njedebe; kpasuo Jizọs iwe, onye, ​​n'ihi gị, wụsịrị Ọbara ya ruo na ndapụta ikpeazụ. Ya mere, ị nwere ike iche banyere ya, na-enweghị iru uju, ihe mgbu, akwa ụta, na-enweghị ịkpọ asị na mmejọ gị, na-atụghị aro ịghara ime ya ọzọ? Ma, Chineke bụ Onye Kachasị Mma, mmehie kacha njọ; ihe mgbu ga-abụ ihe kwesịrị; ya mere ọ ga-akarịrị. Ahụ mgbu gị ọ bụ otu ahụ? Ọ na-ewute gị karịa ajọ ihe ọ bụla ọzọ?
Ihe ịrịba ama nke ezi nchegharị. Ihe ịrịba ama ndị ahụ abụghị anya mmiri Magdalene, nsị Gonzaga: ihe ndị a na-achọsi ike ma ndị na-adịghị mkpa. Egwu mmehie na ụjọ ịme ya; ihe mgbu nke ịnata Hel; a na-echegbu onwe na nzuzo maka ọnwụ nke Chineke na amara ya; rịọsọ ịchọta ya na Nkwupụta; akpachapụ anya iji ụzọ dị mma iji chekwaa ya, na obi ike siri ike iji merie ihe mgbochi iji nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi: ndị a bụ ihe ịrịba ama nke ezi nchegharị.
Contrition dị mkpa maka Nkwupụta. Ọ ga-abụ ihe mkpasu iwe nye Jizọs ikpughere ya mmehie ndị ahụ, n’enweghị ụfụ nke ime ha; Kedu nna ga-agbaghara nwa nwoke nke boro onwe ya ebubo, mana na enweghị mmasị, na ebughi n'uche imegharị onwe ya? Na-enweghị nchegharị ọ bụ ihe ọ bụla, Nkwupụta bụ arụ. You na-eche banyere ya mgbe ị na-ekwupụta? You na-eteta ihe mgbu ahụ ruo ókè ị nwere ike? Naghị echegbu onwe gị karịa maka nnwale ahụ karịa maka nghọta nke nchegharị?
OMUME. - Mee ụfọdụ nchegharị; kwụsị na okwu ndị ahụ: Achọrọghị m ịme ọzọ n'ọdịnihu.
Nke gara aga Post Gara aga post:Chee echiche taa na oku di mfe ijiri Chineke na onye agbata obi gi n'anya
Next Post → Post ozo:Onu ogugu oge obula: ike okwu gi
maka ozi zipu ozi email na [email protected]m ail.co